SomaliTalk.com » Ciidamada AMISOM oo warsaxaafadeed ka soo saaray dad shacab ah oo ay ku laayeen Muqdisho
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Wednesday, November 24, 2010 // 1 Jawaab
Ciidamada AMISOM ayaa warsaxafaadeed ka soo saaray dad shacab ah oo ciidamadaasi ay ku dileen Muqdisho, waxaana warsaxafadeedka AMISOM u qornaa sidan:
War saxafadeed November 23 2010
Arrin aad u foolxun oo wax laga xumaado ah ayaa maanta oo Talaado ah ka dhacay Magalada Muqdisho oo ay ku dinteen laba qof oo rayid ah.
Baaritaan ayaa socda balse waraarka nasoo gaaray ayaa tilmaamaya in kolonyo gaadiid ah oo ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ay saarnaayeen ay xabado ku fuureen shacab jiidka marayay.
Falkaas foosha xun waxaa nasiib xumo ku dhintay laba qof oo rayid ah todobo kalena waa ay ku dhaawacmeen. Mid ka mid rayidka dhaawacmay ayaa isbiitalka Ciidamada Nabad ilaalinta ee AMISOM la geeyay Lixda kalena waxaa loo qaaday isbitaalka Madiina. Waxaan diyaar u nahay in aannu daawayno lixda kale haddii loo baahdo.
“Illaa iminka nooma cadaanin sababta rasmiga ah ee ay ciidamadeena xabadda u fureen lamana hubo in ay naftooda uga baqeen. Dhamaan Ciidamada falkaas gaystay gacanta ayaa lagu dhigay isla markaasinna xabsi ayaa la geeyay. Baaritan ayaana socda si ay loo ogaado falka sida uu u dhacay,” Saas waxaa yiri Taliyaha Ciidamada Nabad ilaanta ee AMISOM, Jeneraal Nathan Mugisha.
“Nolosha iyo amniga shacabka Soomaaliyeed waa arrin aad ula weyn ciidamada AMISOM falkaan dimashada iyo daawaca gaystay waa mid aan aad uga xunnahay. Waxaan tacsi tiiranyo leh u diraynaa qoysaska laga geeriyooday iyo kuwa dhaawaca soo gaaray,”
“Waxaan mahad ballaaran u soo jeedinaynaa saraakiisha caafimaadka AMISOM iyo kuwa rayidka ah oo isla markiiba soo gaaray goobta uu falku ka dhacay. Waxaan iyana mudan in aannu u mahad celino shacabka gacan ka gaystay arrintaas,”
“Anigoo ah Taliyaha Ciidamada Nabad ilaalinta AMISOM waaxan arrintani u sheegay Madaxweynaha Soomaaliya Mudanne Sheekh Sharif Sheekh Axmed iyo Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmajo. Waxaan labadaa masuul u sheegay in ay AMISOM baaritaan wadda oo welibana talaaba cusul marsiin doonto ciidamada AMISOM ee falkaasi gaystay wixii ku soo caddaada.
“Dadweynaha Soomaliyeed waxaan u sheegaynaa haddii aannu nahay AMISOM waxaan Soomaaliya u joogna in aannu shacabka caawino oo an ilaalino. Ciidamo tira badan oo Habeen iyo maalin shaqeeya oo loogu talagalay in ay Muqdisho xoreeyaan ayaa inoo jooga,”
“Falkanni waa mid laga xumaado. Dadwaynahu xaq ayay u leeyihiin in ay naga caroodan. Waxaan u cadaynaynaa shacabka Soomaaliyeed in ay ogaadaan in aannu shaqadeena wadi doono waxaanna ka codsanaynaa shacabka in faalkani fosha xun uusan na kala fogaynin,”
1 Jawaab " Ciidamada AMISOM oo warsaxaafadeed ka soo saaray dad shacab ah oo ay ku laayeen Muqdisho "
Wednesday, November 24, 2010 at 10:34 am
WAAN KAXUMAHAY DHIMASHADA
somali inta ay AMISOM,EITHOPIA kudigrinaayaan Dadku sidaan ayey udhiman horayna way udhimanayeen muddo 20 sano ahayd
waxaas ha,isku dalinina ee waxa runta ah wax kaqora ama kasheega
AMISOM inay wax disho ayey mushaar kuqaadataa
Dagal inuu dhamaado marabto
DADKKINAAN wax Qoro Dowlad waad diideen Nabadda kama shaqeesaan
Haddaan Dowlad lahelin AMISOM sidaasey ullayn iyo kadaran
SOMALIDA DAN UGUMA JIRTO KOXAHAAN DADKA LAAYA
KUWAN BARLAMANKA ISBARADA UTAAL
LAND LAND YADA ayaga xataa QOLO waxay leeyihiin ATOM ayaan ladagalameenaa
KUWA KALENA Dhulbalaarsi iyo xududihii Gumeysiga sameeyay ayey raadinayaan
DOWLAD daacad ah